blog ဝွံ ဟိုတ်နူရန်တၞံကုင်္ ညးမလုပ်computerသဇိုင်တံတဲု ပတိုန်လဝ်soflwareတံရ။တဲုပလန် software မနွံပမိက်ပင်္ဍုPCအဲညံင်ဟွံဂွံကလေံအာကီုဒနဲာင်္လုစိုပ်ပ် ညံင်ဂွံသုင်စေဲာမာန် ရန်တမအ်သ်ာဏံတဲု ပ္တိန်ထၐးလဝ် Software တံဝွံရ။ဟွံဍိုက်ပေင်မ္ဂး ဒုဟ်ဂ်ှလပတင်တဲု ဘိုင်ကုင်္ကသပ်အိုတ်ညိဂှ် မိက်ဂွံအာတ်ဏါအခေါင်ဇရေင်ကေါန်ဂကူမန်ပိဲုသီုညးဖအိုတ်ရ။ တင်ဂုဏ်ရ
Talk it! A talking computer
Software ဝွံမိက်ဂွံတီရမျာင်englishမ္ဂးသုင်စေဲာဂွံမာန်မံင်ရ ဗီုဇကုမိက်ဂွံတီရမျာင်ဂ်ှတက်စုတ်ဒနဲာtype your text here ဂ်ှတဲုဍုင်္်ကေတ်Talk itဂ်ှညိ၊fileလေဝ်ဍောတ်၊ဟွံးဒးinstallမွဲသာ်၊သုင်စေဲာလေဝ်လေဲာကွေံရ။ကေတ်အဏံညိ
PC Tools File Recover Software
AVI to DVD Burner21
Softwareဝွံမုလေဝ်ဟွံမေင်ရ။ဆ္ဂးဗီုရုပ်မွဲမွဲမိက်ဂွံဇနော်ပ္တိတ်ပြဟ်ဟ်မ္ဂးဍေံဖန်က်င်္ုမာန်ရ။ဟွံဒးဂြဲ ZOO မွဲသ်ာဗွဲမပြဟ်ဍေံဇနော်က်ုင်္မာန်ရ။ပဍဲုက်င်္ုဗီုရုပ်ဂ်ှင်္ဍ်ုdouble click မ္ဂးဗွဲစှေ်ဗီုနော်တန်ညိ။ယဝ်ရဍ်ုင်္Right click မ္ဂးနော်တိုန်ကွေံကွေံ တုပ်နဲဂြဲZOOကီုရ။Download
Animated Wallpaper Maker ဝွံသွက်ဂွံသုင်စေဲာ ပလေဝ်ကေတ်backgroundမဒ်ှရ။နွံပမိက် မိက်ဂွံဂွံBackground ကျေဝ်ဝ်မ္ဂးဗီုဒးစိုတ်စုတ်မပ္တံက်င်္ု က ပ္ကဲ ဍာ် အတိုင်ပမိက်စိုတ် ပလေဝ်စုတ်ဂွံမာန်မံင်ရ။နွံပမိက်မ္ဂး,,,,,,,,,,,,င်္ဍ်ုကေတ်အဏံညိ
Norton Antivirus 2011-without key 90 days
ကွန်ပြုတာဇကုSHIT+deleteက်ုင်္ဒ်ှဖျေံလဝ်formatting ကုင်္်ဒှ် ပရောမွဲမွဲယဝ်ရဇိုက်ကလေံလဝ်နွံမ္ဂး ယဝ်နွံပမိက် မိက်ဂွံကလေင်ဂွံပလန်မ္ဂး နကုင်္် softwareဝွံကလေင်ဂလဲာကေတ်မာန်မံင်ရ။<<<<<<>>>>>>download
PLAYER ဒးသုင်စေဲာနွံတှေ် download ကေတ်ညိ။
Download Uni Mon Font
mon unicode font A1
shweo သံစန်လှိုင်း ဖိုဝ အဖြူရောင်သံစဉ် ဗမာ clips freeဗမာVCD ရုပ်ရှင်များ ဗမာ-movies လန်ဂပ်ဒရီဗမာရုပ်ရှင်များ ဗမာ-pioneer shwedream ဗမာ-classic မေနှင်းအေး မင်းသီလ
နိင်ငံတကာWatch free movies online
Download Myanmar3 Unicode font. ဇော်ဂျီ unicode
unicode အပေါ်မှာ အဆင်မပြေရင် ဒီမှာယူပါ
ဒးသုင်စေဲာနွံမ္ဂး download ကေတ်ညိ
internet download accelerator download Norton Antivirus 2009 tri game